Caawinta Deriskeena Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Caawinaada Deriskayaga Dutchtown
La cusbooneysiiyay Abriil 14th at 6am.
Maxay sharci-dejinta sharci dejinta ee dhowaan iyo tallaabada aan faa'iido doonku u ahayn dadka deggan Dutchtown iyo ganacsiyada yaryar ee xaafaddayada? Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican inaan u kala jabinno waxa aan ka ognahay biilasha kala duwan iyo sida ay u saameyn karaan deriskeenna iyo ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah.
Lacag bixinta shaqsiyaadka iyo qoysaska
The Sharciga CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Security Security Act) waxay shaqsiyaadka siin doontaa gargaar toos ah qaab lacag ah oo gacanta ugu jirta qoysaska iyada oo sidoo kale balaarin doonta dheefaha shaqo la'aanta si loo caawiyo kuwa shaqadooda ku waayey COVID-19.
Shakhsiyaadka kasbada wax kayar $ 75,000 sanadkii waa inay helaan lacag hal mar oo lacag ah oo ah $ 1,200. Haddii aad xaas tahay, lammaane kasta ayaa hela lacagtaas. Haddii aad carruur leedahay, cunug walba wuxuu noqonayaa $ 500 oo dheeri ah. Sidaa darteed, haddii aad ku jirto qoys xaas leh oo leh laba carruur ah oo kayar $ 150,000, waxaad filan kartaa inaad hesho $ 3,400 wadar ahaan. Haddii qoyskaagu kasbado lacag intaas ka badan, lacagta aad heshaa way sii yaraanaysaa qoysaska sameeya in ka badan $ 198,000 ma heli doonaan wax taageero lacageed ah.
Jeegaga ayaa ku bixi doona boostada ama si toos ah ayaa loo dhigi doonaa iyadoo kuxiran macluumaadka uu shaqsi ku hayo feylkiisa Adeegga Dakhliga Gudaha ama Maamulka Amniga Bulshada. Lacagta waxaa loo qaabeeyey sidii deyn canshuur hore loo qaadayo.
Waqtiga Canshuurta La Kordhiyay
Marka laga hadlayo canshuuraha, waqtiyada loo qabtay canshuuraha federaalka, Canshuuraha dakhliga gobolka Missouri, Iyo Canshuuraha laga helo Magaalada St. Waxaa lagu kordhiyay Julaay 15th, 2020. Sikastaba, noocyada foomamka qaarkood iyo warbixintuba wali waa loo baahan yahay, markaa la tasho khabiir canshuuraha ah hadaad su'aalo qabto.
Gargaarka Kale ee Qoysaska
Sharciga CARES waxaa ka mid ah lacagaha degdegga ah ee loogu talagalay barnaamijyada cuntada iyo nafaqada iyadoo loo maleynayo in gobolka Missouri uu dhaqso ugu dhaqaaqayo inuu ka faa'iideysto isbeddelada. Tan waxaa ka mid ah suurtagalnimada in la kordhiyo SNAP Faa'iidooyinka iyo ballaarinta u-qalmitaanka SNAP ee qoysaska leh carruurta dugsiga ee hadda guriga jooga. Booqo Waaxda Adeegyada Bulshada ee Missouri si aad u hubiso wixii ku soo kordha.
Gargaar Bixiyeyaasha Daryeelka Ilmaha
Sharciga CARES wuxuu u oggolaan doonaa shaqsiyaadka iskood u shaqeysta, oo ay ku jiraan bixiyeyaasha xanaanada cunugga, inay uqalmaan Caawinta Shaqo La'aanta Musiibada.
Gargaarka dadka shaqo la'aanta ah
Lacagta caymiska shaqo la'aanta waxaa lagu kordhiyaa $ 600 oo dheeraad ah usbuucii. Halkan ku fayl garee faa'iidooyinka shaqo la'aanta ee Missouri.
Ganacsiyadeena Yaryar ee Dutchtown
Amaahda Musiibada ee Maamulka Ganacsiga Yaryar
Missouri waxay u magacowday aag musiibo dowlada dhexe taasoo u fasaxday fursada ganacsiyada yaryar dalbo amaahda gargaarka musiibada caadiyan loogu talagalay waxyaabaha sida dabka, daadadka, ama dhacdooyinka kale ee cimilada. Qadarka lacagta ee la heli karo ayaa sidoo kale lagu kordhiyay Xeerka DARYEELKA.
U-qalmitaanka amaahda Dhaawaca Dhaawaca Dhaqaalaha waxay ku saleysan tahay saameynta dhaqaale ee COVID-19. Heerka dulsaarku waa 3.75 boqolkiiba ganacsiyada yaryar. Heerka dulsaarka ee ururada aan macaash doonka aheyn waa 2.75 boqolkiiba. SBA waxay bixisaa amaahyo dib-u-bixin muddo-dheer ah si looga dhigo lacagaha la awoodi karo, ugu badnaan 30 sano oo ay heli karaan hay'adaha iyada oo aan lahayn awood dhaqaale oo ay ku dejiso saameynta xun dhib la'aan.
Deymaha waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin deyn, mushaar bixin, xisaabaadka la bixin karo, iyo biilal kale oo ku soo kordhay COVID-19 awgeed. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo aad u dalbato, booqo bogga internetka, laakiin la soco dalabku wuxuu sababay in websaydhadu gaabiso oo ay dhacdo mararka qaarkood.
Codsadeyaashu waxay ka dalban karaan khadka tooska ah, waxay heli karaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kaalmada masiibada waxayna ka soo dejisan karaan codsiyada goobta Websaydhka SBA. Codsadeyaashu waxay sidoo kale ka soo wici karaan Xarunta Adeegga Macaamiisha ee SBA 800-659-2955 ama email calamcustomerservice@sba.gov wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan kaalmada masiibada ee SBA. Shaqsiyaadka dhagaha la 'ama maqalka culus ayaa soo wici kara 800-877-8339.
In kasta oo weli lagu talinayo in codsadayaashu ay sii wadaan iskudayada ay ku dalbanayaan marinka amaahda SBA ee musiibada, tan ayaa laga yaabaa inaysan suurtagal u noqon qaar ka mid ah sababtoo ah baaxadda weyn ee taraafikada. Waxa kale oo aad daabacan kartaa foomamka xaashida oo aad ku soo diri kartaa boostada ama elektaroonig ahaan ayaad ugu soo dhejin kartaa. Codsiyada la dhammaystiray waa in lagu soo diraa Xarunta Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Mareykanka, Xarunta Wax-qabadka iyo Bixinta, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, Tx., 76155 ama emayl loogu diro astroloans@sba.gov.
Ilaha kale ee Ganacsiga Yaryar
Xarunta Macluumaadka Ganacsiga ee COVID-19
The Rugta Gobolka ee St. ayaa haysa mareegta ugu casrisan si ay u bixiso macluumaad ku saabsan COVID-19, oo leh macluumaad ku saabsan ilaha ganacsiga, ilaha gobolka, safarka, iyo cusbooneysiinta dhacdooyinka. Fadlan dib u hubi badanaa si aad u aragto macluumaadka ugu dambeeyay.
Sahanka Saameynta Gobolka
Fadlan buuxi Sahanka Saameynta Gobolka oo ay qabatay Rugta Gobolka ee St. Louis si ay wax badan uga ogaadaan baahiyaha ganacsiyada maxalliga ah iyo sida ugu wanaagsan ee loogu adeegi karo.
Sanduuqa Ilaha Ganacsiga Yaryar
The Iskaashiga Horumarinta Dhaqaalaha ee St., Iyo Hay'adda Horumarinta St. Louis waxay bixiyaan a amaah dulsaar eber ah oo gaaraya $ 5,000 ganacsiyada yaryar ee Magaalada St. Louis iyo St. Louis County ee ku habsaday dhaawac dhaqaale sababo la xiriira xiisadda COVID-19. Faahfaahinta amaahda ayaa laga heli karaa halkan.
Codso amaah halkan. Su'aalaha ku saabsan barnaamijka, fadlan emayl u soo dir bizhelp@stlpartnership.com.
Sanduuqa Waxqabadka Gobollada ee St. Louis Foundation
The Mu'asasada Bulshada ee St. Louis ayaa aasaasay laba lacag oo lagu caawinayo ganacsiyada yaryar iyo kuwa aan macaash doonka ahayn.
The Sanduuqa u adkaysiga Gateway waxay gacan ka geysan doontaa bixinta gargaar lacageed oo muddo gaaban ah ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah iyo shaqaalahooda.
The Sanduuqa Waxqabadka Gobolka waxaa loo aasaasay si toos loogu caawiyo ururada maxalliga ah ee aan macaash doonka ahayn ee u fidiya adeegyada dadka uu ku dhacay fayraska oo ay ku jiraan carruurta, waayeelka, iyo kuwa go'doonsan.
SBDC-da Mareykanka — Missouri
Si looga caawiyo milkiileyaasha ganacsiyada inay u diyaargaroobaan duruufaha is beddelaya ee la xiriira COVID-19, the Xarunta Horumarinta Ganacsiga Yaryar ee Missouri (SBDC) waxay haysaa talo soo jeedinno ku wajahan ganacsiyada dhaqaalahoodu saameynta ku yeeshay.
Xeerka Jawaabta Coronavirus ee Qoysaska Koowaad, Ganacsiyada Yaryar, iyo Fasaxa Shaqaalaha
Haddii aad shaqaale leedahay, sidoo kale waxaa jira xoogaa isbeddello ah oo ku saabsan Sharciga Fasaxa Caafimaadka Qoyska. Tani badanaa waxay khuseysaa oo keliya loo shaqeeyeyaasha daboolan oo leh 50 ama ka badan shaqaale. Sharciga Fasaxa Bukaanka ee Xaaladaha Degdega ah (EPSLA) wuxuu si ku-meel-gaar ah u amrayaa shaqaalaha waqtiga-buuxa in la siiyo mushaharkooda oo dhan illaa 2 toddobaad marka ay awoodi waayaan inay soo xaadiraan shaqada sababo la xiriira coronavirus Tani waxay khuseysaa ganacsi kasta oo ay ka yar yihiin 500 oo shaqaale ah.
Intaa waxaa dheer, sharci cusub, Xeerka Ballaarinta Fasaxa Qoyska iyo Caafimaadka, wuxuu u baahan yahay shaqsi kasta oo loo shaqeeye u shaqeeyo ugu yaraan 30 maalmood (ka hor maalinta koowaad ee fasaxa) wuxuu qaadan karaa illaa 12 toddobaad oo fasax shaqo ilaalin ah si loogu oggolaado shaqaale, oo aan awoodin inuu shaqeeyo ama taleefon ka shaqeeyo, si uu u daryeelo cunugga shaqaalaha (ka yar 18 sano) haddii iskuulka cunugga ama goobta xannaanada la xirayo ama bixiyaha xanaanada cunugga aan la heli karin xaalad caafimaad oo degdeg ah awgeed. Ficilkani wuxuu khuseeyaa iyadoon loo eegin haddii shaqaaluhu yahay mid buuxa ama mid dhiman.
10-ka maalmood ee ugu horeeya EFML laga yaabaa in aan la bixin. Muddadan 10-ka maalmood ah, shaqaaluhu wuxuu dooran karaa inuu beddelo wixii fasax lacag ah ee is biirsaday (sida fasax ama fasax jirro) si uu u daboolo qaar ka mid ah ama dhammaan 10-ka maalmood ee mushahar la'aanta ah, hase yeeshe, loo shaqeeyaha kama dalban karo shaqaalaha inuu beddelo fasax mushahar ah. Kadib 10-ka maalmood, loo-shaqeeyaha waxaa laga rabaa inuu siiyo shaqaalaha waqtiga-buuxa saddex-meelood laba meelood heerka caadiga ah ee shaqaalaha saacadaha shaqaaluhu haddii kale sida caadiga ah jadwalka u dhigi lahaa. Sharciga cusub wuxuu xadidayaa xaq u lahaanshahan mushaar $ 200 maalintii iyo $ 10,000 wadar ahaan shaqaalaha.
Loo-shaqeeyayaasha waxaa loo celin doonaa qaab doollar oo ah canshuuraha doollarka. Sharcigu wuxuu oggol yahay dhibcaha canshuurta ee la soo celin karo "qaddar u dhigma 100% ee kuwa aqoonta u leh" fasaxa jirada ee uu shaqaaluhu u dhiibo rubuc kalandar kasta. Deynta ayaa laga qaadi karaa qeybta loo shaqeeyaha ee canshuuraha Lambarka Bulshada. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xoogaa caps ah iyo xadka. Gaar ahaan, soo celinta fasaxa jirada waxay kuxirantahay inta udhaxeysa $ 200 iyo $ 511 maalintii iyadoo kuxiran dhacdada u qalmida. Waxaa si hufan u jiri doona koorsada laba toddobaad oo ah amaahda fasaxa jirada.
Si kastaba ha noqotee, Sharciga waxaa sidoo kale ku jira luqad u oggolaanaysa Xoghayaha Shaqada inuu ka reebo bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka iyo kuwa wax ka qabta xaaladaha degdegga ah qeexitaanka shaqaalaha qaadan kara fasaxaas, iyo in laga dhaafo ganacsiyada yaryar ee ka yar 50 shaqaale ah haddii fasaxa loo baahan yahay uu khatar galinayo jiritaanka jiritaankooda ganacsi. Ka cafintaan ayaa si cad u dhalisay jahwareer ku saabsan yaa sameeya iyo maahan inuu bixiyo labada todobaad ee fasaxa ah.
Sababtoo ah isbeddeladaan sharciga waa kuwo dhib badan oo ganacsi kasta oo yar waa inuu la tashado ilo dheeri ah ama xirfadle sharciyeed ka hor inta uusan go'aannada ganacsi gaarin.
Waxbarashada iyo Doodda
Khasnaji Tishaura Jones iyo Don Calloway waxay si qoto dheer uga wada hadleen gargaarka dhaqaale ee shakhsiyaadka, ganacsiyada yaryar, iyo kuwa aan macaash doonka ahayn fiidiyowgaan.
Sahaminta Saameynta Ganacsiga Yaryar iyo Subaxa Weyn
Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri qaadanayaa a sahan ee ganacsiyada yaryar ee Missouri si ay uga caawiyaan fahamka arrimaha iyo caqabadaha ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah ay hadda wajahayaan.
MMSC ayaa sidoo kale bixisa websaydho toddobaadle ah iyo doodo, Subaxdii Ugu Weynayd, subax walba oo Arbaco ah 8:30 subaxnimo. Baro sida ganacsiyada kale ee yaryar iyo xaafadaha ay ula qabsanayaan la tacaalida dhibaatada COVID-19.
MMSC waxay dhowaan la shaqeysay DT2 ee loogu talagalay Hindisaha UrbanMain si dib loogu soo nooleeyo Downtown Dutchtown.
Sanduuqa Midnimada ee InvestSTL
InvestSTL abuuray iyaga Sanduuqa Midnimo ee Xaafadda si loo caawiyo ururada xaafadaha, barnaamijyada horumarinta bulshada, iyo ganacsiyada yaryar ee maxalliga ah cimilada COVID-19 iyadoo loo xoojinayo kaabayaasha aadanaha, urur, iyo dhaqaale ee heer xaafadeed.
The Cusbooneysiinta Xaafadaha ee Xiriirinta deeq ayaa loo heli karaa ururada xaafadaha rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn iyo ururo la mid ah. The Xasiloonida CDC deeq ayaa loo heli karaa ururada horumarinta bulshada ee diiradda saaraya xaafada si ay u ilaaliyaan howlaha aasaasiga ah, shaqaalaha iyo jawiga shaqada caafimaadka qaba. Iyo Xaafadda Ganacsi Yaryar wiish deeq ayaa loo heli karaa ganacsiyada yaryar ee xaafadda u adeega si loo ilaaliyo shaqaalaha, tas-hiilaadka iyo kharashyada kale ee muhiimka ah.
The Degmada Horumarinta Bulshada ee Cherokee Street iyo Degmada Ganacsiga Gaarka ah ee Cherokee-Lemp waxay abuureen GoFundMe, Muuji 4 Cherokee Street, si loo caawiyo in ka badan 150 ganacsiyada maxalliga ah iyo shaqaalahooda ku sugan Cherokee Street. Ganacsiyada iyo shaqaaluhu waa inay buuxi arji si aad u hesho caawimaad.
Haddii aad ogtahay ilaha dheeraadka ah ee shakhsiyaadka ama ganacsiyada yaryar, fadlan Aan ogaano markaa waan ku dari karnaa.
Waxa kale oo aad akhrisan kartaa qoraalkeenna kale oo ay ku jiraan liistada ganacsiyada yaryar ee aad taageeri karto inta lagu jiro dhibaatadan.
Filimka hoos Covid-19. Muuji dhamaan qeybaha. Covid-19, DT2, Iyo Dutchtown. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay April 14th, 2020 .
DutchtownSTL.org Covid-19 Caawinaada Deriskayaga Dutchtown